Fanidiana tanteraka: Manakaiky ny "Scenario 4" i Italia
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fanidiana tanteraka: Akaiky ny “Scenario 4” i Italia
Fanidiana tanteraka: Akaiky ny “Scenario 4” i Italia
Oktobra 31, 2020
Italia dia vao mainka iharan'ny fanakorontanana ara-tsosialy any amin'ny tanàna italianina sasany, izay misy vondrona mpampihorohoro, mahery fihetsika ary Covid-19 fanoherana ny deniers. Ny tahan'ny aretin'ny Skyrocketing sy ny fiakaran'ny vidim-piainana dia manakaiky kokoa an'i Italia amin'ny fanidiana vaovao amin'ny faritra midadasika.
Ireo manam-pahaizana avy amin'ny Ivon-toerana ambony momba ny fahasalamana dia mihevitra ny faritra 5 - Lombardy, Campania, Liguria, Lazio, Valle d'Aosta, ary ny faritany mizaka tenan'i Bolzano izay tandindomin-doza indrindra.
Milan, Naples, Bologna, Turin ary Roma no mijanona ho ivon'ny fiheverana.
Tamin'ny alatsinainy 2 novambra lasa teo, ny fandrarana ny fivezivezena sy ny fanakanana ny hetsika rehetra, ankoatry ny zavatra tena ilaina, dia mety hitranga ao an-drenivohitra Lombard, Milano: mahery vaika ny fifandraisana eo amin'ny governemanta sy ny Faritra ary ny Kaomina. Ireo fepetra ireo dia hiitatra amin'ireo tanàna lehibe hafa sy ny faritra manodidina azy raha tsy voafehy ny aretina, hoy ny Corriere.it manam-pahefana.
Ary tsy voafehy intsony ny aretina hatreto. Nandritra ny andro fahefatra nifanesy Italia dia nihoatra ny firaketana ny aretina vaovao raha oharina tamin'ireo 24 ora teo aloha: 31,084, 199 no maty. Ny faritra tena iharan'izany dia Lombardy (+8.960), Campania (+3.186) ary Veneto (+3.012). Ny ankamaroany dia manana Rt (index contagiousness) lehibe kokoa noho ny 1.25; amin'ny maro dia mihoatra ny 1.5; ao Piedmont sy Lombardy dia ambonin'ny 2 (2.16 sy 2.09).
Miorina amin'ny angona avy amin'ny herinandro teo anelanelan'ny 19 sy 25 Oktobra, ny Higher Institute of Health dia nanambara fa "betsaka ny mety hitrangan'ny faritra 15 mihoatra ny tokonam-baravarankely amin'ny / sy ny faritra fitsaboana amin'ny volana manaraka". Ny isan'ireo olona naiditra hopitaly tao amin'ny tobin'ny krizy dia nanomboka tamin'ny 750 ny 18 Oktobra lasa teo ka hatramin'ny 1,208 herinandro taty aoriana. Ireo isa ireo dia manamafy ny maha maika ny fanapahan-kevitra hentitra, na dia mandà aza ny governemanta fa afaka roa andro dia azo fehezina "toa an'i Frantsa" ny firenena iray manontolo. Nolavin'ny governemanta izany, fa ny minisitra Amendola (Fahasalamana) dia tsy manilika azy mandritra ny andro vitsivitsy: "Raha ilaina izany dia handray ny enta-mavesatry ny safidy isika."
“Toy ny mahazatra, eo afovoan'ny fifanakalozan-kevitra dia misy ny sekoly: mihombo ny tanjon'ny fanakatonana sekoly, ary ny minisitra Azzolina (Fanabeazana) dia natokana ho amin'ny fiarovana ny fampianarana mivantana. Ny zava-misy any Milan dia nofaritana ho "mipoaka" avy amin'ny manampahefana misahana ny fahasalamana, miaraka amina tranga 230 ao anatin'ny iray andro amin'ireo mpianatra ary “olona akaiky” 4 nalefa tany amin'ny quarantine, noho izany dia fianakaviana an-jatony no nihidy tao an-trano nandritra ny alina ary ny dokoteran-jaza no mikorontana.
Ny iray izay tsy te hahalala ny hidin-trano dia ny PM Conte, fa ny PM kosa dia tsy maintsy manamarika fa ny fitandremana, ny fiandohana ary ny fironana hanemotra - ireo toetra nampalaza azy tamin'ny dingana voalohany tamin'ny areti-mandringana - dia tsy handoa intsony: " Makà fotoana dia tsy hita intsony ho vodiondry fa ferana; ary ny fitsapan-kevitra dia mampiseho ny fihenan'ny fahatokisan-tena “.
Toa vao mainka mirona hizara fanapahan-kevitra sy hanadihady momba izany ao amin'ny Parlemanta ny praiminisitra. Ary ny "torolàlana iraisana" dia ny fangatahan'i Carlo Verdelli ao amin'ny lahatsoratra: misy ny fanarenana mazava tsara izay efa nandalovantsika - ny fiatraikany mahomby amin'ny virus, ny famonjena saika tratra tamin'ny voalohan'ny volana aogositra, avy eo ny fahavoazana rehefa isika tao no nametraka "mandihy sy mihira" - ary fiantsoana manaitra ny "foko rehetra izay ananganana an'i Italia" hampivondrona "farafaharatsiny ny fotoana ilaina mba hisorohana ny ratsy indrindra mandroso".
Ny rivotry ny fikomiana dia mitombo ao amin'ny firenena: omaly alina dia anjaran'i Florence. Soa ihany fa misy mari-pamantarana miabo, na dia amin'ity voina ity aza: ohatra, amin'ny fikarakarana be dia be, ny fiarovan-doha oxygène dia ampiasaina bebe kokoa ary ny ventilation mekanika manafika dia kely kokoa. Avy eo koa ny toekarena, ny marary mihetsika izay tamin'ny telovolana fahatelo dia nahatratra 16% ny fitomboan'ny harinkarena faobe raha oharina amin'ny teo aloha: fanidiana vaovao no hanafoana azy, saingy mariky ny fahaveloman'ny fifikirana izany, hoy i Di Vico. Mandritra izany fotoana izany, ny hatsiaka amin'ny fandroahana asa dia nitarina hatramin'ny martsa.